Zimbabwe: Mnangagwa Peeps Into Immortality - allAfrica.com
Last week, in the midst of severe headwinds buffeting Zimbabwe's fragile economy, Mnangagwa's administration announced that numerous roads and buildings -- most of them dilapidated -- would be renamed in honour of selected national heroes. The Cabinet decision immediately triggered a fierce uproar, with critics likening Mnangagwa to a political dwarf who was attempting to force his way into the pantheon of towering luminaries in Zimbabwe's history.
Commentators say Mnangagwa played a peripheral role in the country's protracted liberation struggle, as a long-time aide to Mugabe. They questioned whether he deserves the hour of having 10 roads named after him -- ahead of more illustrious sons and daughters of Zimbabwe.
Former deputy prime minister in the inclusive government between the opposition and Zanu PF Arthur Mutambara was more scathing in his criticism, highlighting that Mnangagwa's latest road-naming adventure was meant to redeem the leader's besmirched name, cementing it in history as well as masking his failures as a leader who promised plenty but has delivered little.
"An incompetent Mnangagwa wants to immortalise himself. All the other name changes are to cover up this wicked ambition. Whether he falls or prevails, he wants immortality. Zimbabweans will be calling his name in eight cities every day, forever. That is the 'big idea' while the country degenerates into unprecedented political and economic mayhem," Mutambara told South African media.